Fitsaboana - Pandawill Technology Co., Ltd.
Tsy misy sehatry ny indostria izay mitsikera tanteraka ny fahombiazan'ny birao sy ny kalitao.
Ny Pandawill Circuits sy ireo mpiara-miasa aminay dia manana fahatakarana lehibe momba ny fenitra sy ny kalitao andrasana amin'ny sehatry ny fitsaboana ary manome antoka ny fahombiazana sy ny fahamendrehan'ireo tabilao izay amboarinay sy omenay.
Ny Pandawill Circuits dia manolotra ny famaranana azo leferina (ao anatin'izany ny HASL miorina amin'ny fivoriambe izay azo ekena amin'ny fampiharana ara-pitsaboana sy manakiana ny fiainana) sy ireo fitaovana laminate rehetra (ao anatin'izany ireo mpanamboatra voatendry raha ilaina izany).
Ny maha-zava-dehibe ny fanarahana ny takelaka fizarana fitsaboana dia zava-dehibe indrindra ary afaka manome làlana fanaraha-maso kalitao sy fanamboarana tanteraka ho an'ny tabilao rehetra omena izahay, ao anatin'izany ny fizarana miampita, ny santionany amin'ny solderability ary ny fizarana fizahan-toetra izay mampiseho ny fanoherana ny delamination mandritra ny fizotran'ny fivoriambe.
Ny takelaka fizaran-tany dia be mpampiasa eran'izao tontolo izao amin'ny fampiharana ara-pahasalamana ary i Pandawill dia manome antoka fa ny birao rehetra omena dia ny kalitao tsara indrindra sy noforonina / novokarina mba hanolorana ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fampisehoana sy ny fahamendrehana.